Alahady 15/11/2015 : Tenin’ Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady 15/11/2015 : Tenin’ Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Bokin’i Daniela Mpaminany (Dan. 12, 1-3)
Amin’izany andro izany dia ho voavonjy ny vahoakanao.
Amin’izany andro izany, hitsangana i Misely ilay filoha ambony, izay miandany amin’ny zanaky ny firenenao, ka amin’izany no ho androm-pahoriana tsy mbola nisy toa azy, hatrizay nisian’ny firenena, ka hatramin’izany andro izany. Amin’izay dia ho voavonjy ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra eo amin’ny boky. Ary maro amin’ireo mandry ao amin’ny vovo-tany no hifoha: ny sasany ho amin’ny fiainana mandrakizay; fa ny sasany ho amin’ny latsa amam-panariana mandrakizay. Izay ho efa hendry hamirapiratra hoatra ny famirapiratry ny lanitra; ary izay ho efa nitarika ny maro ho amin’ny fahamarinana, ho tahaka ny kintana mandrakizay.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina Hebrio (Heb 10, 11-14. 18)
Fanatitra iray monja dia ampy handavorariany mandrakizay izay nohamasininy.
Ry kristianina havana, ny mpisorona rehetra dia mijoro isan’andro hanao ny raharahany, sy manolotra matetika ireny sorona tsy nahafa-pahotana akory ireny, fa i Kristy kosa indray mandeha monja no nanolotra sorona noho ny ota, dia mipetraka mandrakizay eo ankavanan’Andriamanitra; ka hatramin’izao Izy dia miandry ny hanaovana ny fahavalony ho fitoeran-tongony rahatrizay. Fanatitra iray monja dia ampy handavorariany mandrakizay izay nohamasininy; ka rehefa voavela ny fahotana, dia tsy ilaina intsony ny sorona noho ny ota.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 13, 24-32)
Hanangona ny olom-pinidy avy amin’ny vazan-tany efatra Izy.
Tamin’izany andro izany i Jesoa niteny tamin’ny mpianany ny amin’ny hiverenany nanao hoe; “Amin’izany andro izany, rehefa afaka ireo fahoriana lehibe, ny masoandro hihamaizina, ny volana tsy hazava intsony, ny kintana any an-danitra hiraraka, ary ny herin’ny lanitra hihozongozona. Dia ho hita amin’izay ny Zanak’olona avy eo ambonin’ny rahona amin-kery lehibe sy voninahitra. Amin’izay Izy dia haniraka ny Anjely ary hanangona ny olom-pinidy avy amin’ny vazan-tany efatra, hatramin’ny faran’ny tany ka hatramin’ny faran’ny lanitra. Alaovy ho fanoharana ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa antomotra ny fahavaratra. Toy izany koa, rehefa hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia fantaro fa efa antomotra mby eo am-baravarana Izy. Lazaiko marina aminareo fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatongan’izany rehetra izany. Ho levona ny tany aman-danitra, fa ny teniko tsy mba ho levona. Izany andro sy ora izany anefa, dia tsy misy mahalala, na ny Anjely any an-danitra, na ny Zanaka aza, afa-tsy ny Ray ihany.
Alahady faharoa amin’ny Karemy – 01/03/2015 – Tenin’Andriamanitra
Alahady – 01/11/2014 – Tenin’Andriamanitra
Alahady fahatelo amin’ny Karemy – 08/03/2015 – Tenin’Andriamanitra